Ungashintsha kanjani izithonjana zohlelo lokusebenza ku-iPhone | iPhone News
U-Ignacio Sala | 10/04/2022 12:00 | iPhone, Okokufundisa namanyuwali
Shintsha izithonjana zohlelo lokusebenza ku-iPhone Kusivumela ukuthi sinikeze i-iPhone yethu ukuthintwa kokwenza kube ngokwakho, okwaze kwafika i-iOS 14, eyayitholakala kuphela ngenani elincane kakhulu lezinhlelo zokusebenza ezinikeza le nketho.
Uma ukhathele hlala ubona isithonjana esifanayo ku-WhatsApp, Safari, Telegram, Notes, ukusetshenziswa kwebhange lakho... kulesi sihloko sikubonisa zonke izinyathelo okufanele uzilandele ukuze uguqule izithonjana zezinhlelo zokusebenza ku-iPhone.
2 Shintsha izithonjana zohlelo lokusebenza ku-iPhone ngohlelo lokusebenza Lwezinqamuleli
3 Shintsha izithonjana zohlelo lokusebenza ku-iPhone nezinye izinhlelo zokusebenza
3.1 Indlela Iwijethi Yesithombe Esebenza Ngayo: Ilula
3.2 Shintsha Izithonjana Zohlelo Lokusebenza ku-iPhone Ngewijethi Yesithombe: Ilula
4 Uzisusa kanjani izithonjana zezinhlelo esizifakile
5 Ungalanda kuphi izithonjana ze-iOS
Okokuqala nje, kumelwe sazi isebenza kanjani nokuthi kusho ukuthini ukushintsha isithonjana sohlelo lokusebenza. Empeleni, i-Apple ayisivumeli ukuthi siguqule isithonjana sezinhlelo zokusebenza.
Yini esivumelayo, ngokusebenzisa isicelo Izinqamuleli, uwukwenza isinqamuleli sohlelo lokusebenza sisebenzisa isithombe noma isithonjana esisifunayo.
Kusho ukuthini lokhu? Kusinqamuleli ngasinye esisidalayo kuhlelo lokusebenza, sizoba nezithonjana ezimbili zokufinyelela uhlelo lokusebenza: isinqamuleli esisidalile kanye nesithonjana sohlelo lokusebenza.
Isixazululo sale nkinga ukwakha ifolda lapho hambisa izithonjana zohlelo lokusebenza lwangempela futhi ushiye izithonjana zangokwezifiso ezintsha esizidala kudeskithophu silandela izinyathelo engikubonisa zona kulesi sihloko.
Ku-App Store singathola izinhlelo zokusebenza ezahlukene ezisinikezayo amasethi wezithonjana zangokwezifiso eduze Ama ifotho & Isithombe ukwakha izingqikithi. Ezinye zalezi zinhlelo zokusebenza nazo zihlanganisa amawijethi okuhlanganisa kokubili nezimpawu kanye nesithombe sangemuva.
Shintsha izithonjana zohlelo lokusebenza ku-iPhone ngohlelo lokusebenza Lwezinqamuleli
Njengoba ngishilo ngenhla, ukuze ushintshe izithonjana zezinhlelo zokusebenza ku-iPhone kufanele sisebenzise uhlelo lokusebenza lwe-Shortcuts, uhlelo lokusebenza ukuthi uma ungalufakile, ungakwazi. Yilande mahhala ngesixhumanisi esilandelayo.
Uma sesilufakile uhlelo, sivula uhlelo bese silandela izinyathelo engikukhombisa zona ngezansi:
Chofoza kufayela le- + uphawu ekhoneni eliphezulu kwesokudla sohlelo lokusebenza.
Okulandelayo, sibhala i- igama lesinqamuleli.
Okulandelayo, chofoza ku Faka isenzo nasebhokisini lokusesha sibhala vula uhlelo lokusebenza, ukukhetha umphumela oboniswe esigabeni Izikriphthi zase.
Esinyathelweni esilandelayo, chofoza umbhalo App futhi sikhetha ukuthi yiluphi uhlelo lokusebenza esifuna ukuluvula.
Okulandelayo, sichofoza ku- 4 imigqa evundlile ekhoneni eliphezulu kwesokudla bese ukhetha Engeza esikrinini sasekhaya.
Ewindini elilandelayo chofoza uphawu kunqunywe kusengaphambili yokufinyelela okuqondile bese ungena Khetha isithombe ukukhetha isithombe esifuna ukusisebenzisa. Futhi singasesha isithombe kudivayisi yethu noma sithathe isithombe.
Ekugcineni, siyacindezela Faka.
Esikrinini sasekhaya, kuzobe sekudalwe isinqamuleli esinesithombe esisikhethile esisebenzisa i-WhatsApp. Manje kufanele hambisa uhlelo lokusebenza lwe-whatsapp kufolda futhi esikhundleni salokho, sebenzisa isinqamuleli esisidalile.
Shintsha izithonjana zohlelo lokusebenza ku-iPhone nezinye izinhlelo zokusebenza
Uhlelo lokusebenza esizolusebenzisa ukushintsha izithonjana zohlelo lokusebenza, isithombe sangemuva namawijethi ukuze zonke zilandele ukwakheka okufanayo Iwijethi Yesithombe: Ilula.
With lolu hlelo lokusebenza inqubo yokuguqula izithonjana zezinhlelo zokusebenza ku-iPhone ishesha kakhulu, njengoba kwenziwa ngokuhlanganyela ohlelweni hhayi ngayinye ngayinye njengohlelo Lwezinqamuleli.
Iwijethi Yesithombe: Ilula, iyisicelo esingakwazi download mahhala. Singasebenzisa uhlelo lokusebenza ngaphandle kwanoma yiluphi uhlobo lomkhawulo ngokushintshanisa ukubona isikhangisoNgakho-ke khokha ama-euro angama-22,99 ukuze uwasuse ngokuphelele.
Lolu hlelo lokusebenza ibuyekezwa ngezikhathi ezithile ukwengeza izingqikithi ezintsha kuye ngesikhathi sonyaka esizithola sikuso.
Iwijethi Yesithombe : IlulaMahhala
Uma lolu hlelo lokusebenza lungahlangabezani nezidingo zethu, singakhetha ezinye izindlela ezitholakala ku-App Store, inqobo nje uma sizimisele ukukhokhela okubhaliselwe abakunikezayo.
Indlela Iwijethi Yesithombe Esebenza Ngayo: Ilula
Uhlelo lokusebenza Lwewijethi Yesithombe: Lulula isebenza ngamaphrofayili. Uma sesikhethe ukuklama (izithonjana, iphepha lokunamathisela odongeni kanye newijethi) esifuna ukuyisebenzisa, uhlelo lokusebenza luzosimema ukuthi silande iphrofayili ku-iPhone yethu.
Uma sesifake iphrofayili kudivayisi, isikrini sasekhaya izobonisa izithonjana zazo zonke izinhlelo zokusebenza kanye nezangempela. Uma sisusa iphrofayela, zonke izithonjana ezintsha ezihambisana naleyo timu zizokhishwa kudivayisi.
Shintsha Izithonjana Zohlelo Lokusebenza ku-iPhone Ngewijethi Yesithombe: Ilula
Uma sesilande futhi safaka isicelo, siyasivula bese siya ku phansi lapho zonke izinketho esinika zona zitholakala khona:
Itimu. Lesi sigaba sibonisa amasethi ezithonjana ongazisebenzisa ku-iPhone yethu.
amawijethi. Esigabeni Sewijethi, sithola amawijethi afana nezindikimba zesithonjana ezitholakala esigabeni Setimu.
Into. Ngaphakathi kwento, amaphephadonga afanayo aboniswa nezimpawu ezitholakala esigabeni setimu, amaphakethe wesithonjana namafonti.
Eyami. Esigabeni Sami, okuqukethwe ngokwezifiso esikudalele ukukusebenzisa nohlelo kuyagcinwa.
Njengoba esikufunayo ukushintsha izithonjana zezinhlelo zokusebenza ze-iPhone, chofoza Itimu futhi sizulazula phakathi kwezithombe ezahlukahlukene ezisibonisa ukuthi i-iPhone yethu izobukeka kanjani ngochungechunge ngalunye lwezithonjana.
Uma sesilitholile iphakethe lesithonjana esithanda kakhulu, sichofoza kulo buka isithombe esikhulu.
Okulandelayo, chofoza ku Londoloza ngemva kwesikhangiso (isikhangiso).
Ngemuva kwalokho iwindi lezilungiselelo zetimu lizovuleka. Kuleli windi, singamisa:
Wallpaper. Chofoza ku-Londoloza ukuze isithombe sangemuva setimu sigcinwe kuhlelo lokusebenza lwezithombe bese ukwazi ukusisebenzisa njengephepha lodonga.
amawijethi. Lapho uchofoza okuthi Londoloza, iwijethi eboniswayo izogcinwa ukuze isetshenziswe esikrinini sasekhaya sedivayisi yethu. Singakha amawijethi amasha esigabeni Sezinto.
Izithonjana. Lesi sigaba sibonisa zonke izithonjana zohlelo lokusebenza lwamanje kanye nesithonjana ezizoshintshwa ngaso. Lesi sigaba sisivumela ukuthi singahloli izinguquko esingazithandi futhi siphawule ezinye ezingamakwanga ngokuzenzakalelayo.
Isithonjana Ngokwezifiso. Kulesi sigaba sokugcina, singasivumela ukuthi sisebenzise noma yisiphi isithombe esigcinwe kumtapo wolwazi njengesithonjana sohlelo lokusebenza (isenzo esingase futhi sisenze ngohlelo lokusebenza Lwezinqamuleli).
Uma sesiqede zonke izinyathelo, chofoza Faka Izithonjana ze-XX, lapho i-XX iyinani lezithonjana zohlelo lokusebenza ezizothathelwa indawo izithonjana zazo.
Ewindini elilandelayo, chofoza inkinobho Landa Iphrofayela.
Ngemuva kwalokho iwindi lesiphequluli lizovuleka, lapho kufanele sichofoze khona Vumela.
Ekugcineni kuboniswa iwindi lapho simenywe khona sebenzisa iphrofayili esiyilandile.
Manje kufanele sifake iphrofayili esiyilandile. Le phrofayela izobonisa zonke izithonjana ezintsha esikrinini sasekhaya sedivayisi yethu. Ukuze uyifake, siyafinyelela Izilungiselelo > Iphrofayili ilandiwe > Faka > Faka.
Uma inketho ingaboniswa Iphrofayela ilandiwe, silandela umzila olandelayo: Izilungiselelo > Okuvamile > I-VPN nokuphathwa kwedivayisi > ngokubheka phansi.
Okulandelayo, siya kuhlelo lokusebenza lwezithombe futhi sisebenzise isithombe esisilande kuhlelo lokusebenza njengephephadonga (chofoza inkinobho yokwabelana bese ukhetha Wallpaper)
Ekugcineni, sekuyisikhathi sokuba engeza amawijethi asuselwa kuzindikimba. Inqubo iyafana nokufaka noma iyiphi enye iwijethi kodwa ngokukhetha iwijethi kuhlelo lokusebenza Lwewijethi Yesithombe: Ilula.
Manje, kufanele hambisa zonke izinhlelo zokusebenza zangempela kufolda eyodwa bese uqala ukusebenzisa izinqamuleli ezidaliwe. Uma ungathandi ukuthi kwenzeke kanjani, kufanele nje ususe iphrofayela oyifakile.
Uhlelo lokusebenza kusivumela ukuthi sifake amaphrofayili ahlukene ukuhlanganisa isithonjana esihlukile nemiklamo yewijethi.
Uzisusa kanjani izithonjana zezinhlelo esizifakile
Uma sikhathele isici esisha esiboniswa yi-iPhone yethu noma kungesikho ebesikulindele, ukususa zonke izithonjana ezintsha, kufanele nje sisuse iphrofayili esiyifakile (uma ususa iphrofayili, izinqamuleli ezidalwe nephrofayili zizosuswa, hhayi uhlelo lokusebenza).
para susa iphrofayili, kufanele senze lezi zinyathelo ezilandelayo:
Sithola ifayela le- Izilungiselelo yedivayisi yethu bese ungena General.
Okulandelayo, chofoza ku I-VPN nokuphathwa kwedivayisi bese ungena kubheke phansi.
Ungalanda kuphi izithonjana ze-iOS
Uma ufuna shintsha izithonjana zohlelo lokusebenza ojwayele ukuyisebenzisela ezinye ezifanayo, kufanele ubheke iwebhu Izithonjana zezinhlelo zokusebenza ze-macOS.
Kule webhusayithi uzothola izithonjana ezingaphezu kuka-12.000 zazo zonke izinhlobo, kokubili i-iOS ne-macOS, izinhlelo zokusebenza zeWindows ne-Android futhi zonke ziyatholakala ukuze zilandwe mahhala.
Zonke izithonjana zikhona ahlukaniswe ngezigaba futhi, ngaphezu kwalokho, kusivumela ukuthi senze ukusesha ngamagama ezinhlelo zokusebenza noma amasistimu okusebenza.
Izimpawu ze-se landa ngefomethi ye-.icns ngokuqondile ohlelweni lokusebenza lwezithombe.
Enye iwebhusayithi ethokozisayo ye landa amaphakethe wesithonjana ukwenza ngendlela oyifisayo izinhlelo zokusebenza ze-iPhone yethu, siyithola ku isithonjana esiyisicaba. Nakuba ukubhaliswa kuyadingeka ukuze ulande izithonjana, eziningi zitholakala mahhala.
Izithonjana alandwa ngefomethi ye-.png, ngakho-ke zizogcinwa ngokuqondile kuhlelo lokusebenza lwezithombe.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba ze-IPhone » iPhone » Okokufundisa namanyuwali » Ungashintsha kanjani izithonjana zohlelo lokusebenza ku-iPhone
I-iOS 16 ne-watchOS 9 ingaba yizinto ezintsha zenkanyezi ku-WWDC 2022
Isizukulwane sesibili se-AirPods Pro sizobona ukukhanya ekupheleni kuka-2022